Jumlada 70% Alkohol Antibacterial Gel Hand Sanitizer with keychain Customized Supplier and Manufacturer | Kafiican
Magaca Product: 70% Alcohol Instant Antibacterial Gel Hand Sanitizer
Lambarka Moodalka: BTX-002
Maaddooyinka firfircoon: Khamriga Ethyl 70% (v / v)
Waxyaabaha aan firfircooneyn: Aminomethyl propanol., Carbomer, Glycerin, Propylene glycol, Biyaha.
Awood: 2.7 OZ / 1.0 OZ
Isticmaal Gaara: Bakteeriyada lidka ku ah, jeermiska jeermiska iyo nadiifinta
MOQ: 10000 gasacadood
Shahaadada: SGS, FDA, GAAR
Faahfaahinta xirxirida： 48 gasac / kartoon
1. Waxay ku dili kartaa bakteeriyada 15 ilbiriqsi gudahood. Nadiifiyaha gacanta ayaa ka kooban 70% aalkolo wuxuuna waxtar badan u leeyahay nadiifinta. Haddii aad u baahan tahay habeyn, warshaddeenna waxay waliba kuu habeyn kartaa gacmo nadiifiyeyaal adiga kuu gaarka ah. Tusaale ahaan, isopropanol, benzalkonium chloride, ama aalkolo ka kooban waxyaabo kala duwan.
2.Wash lacag la'aan. Jeermiska gacmaha lagu nadiifiyo waa nadiifiye gacmo oo aan ku dhaqin biyo. Nadiifiyaha hore ee gacmaha, waa inaad hal dhinac ku dhaqdaa biyo nadiif ah kadib markaad isticmaasho. Haddii kale, ma aha oo keliya inay bakteeriya gacmahaaga ku jiri doonaan, laakiin gacmahaagu sidoo kale waxay noqon doonaan kuwo si xad dhaaf ah u dhegta. Nadiifiyaha gacantu wuxuu kaa dhigi karaa inaad dhaqso u dhaqdo gacmahaaga, waxaadna u isticmaali kartaa inaad ku nadiifiso gacmahaaga meel kasta oo aan lahayn saxan.
3.Fur qalalan Ka dib markaad tirtirto gacmahaaga, nadiifiyeha gacanta ayaa dhaqso u qallajin doona. Waxaad toos u aadi kartaa shaqada.
4. Naqshadaynta dhalada fayodhowrka gacantu waa mid aad ugu habboon dadka isticmaala. Jidh yar. Si fudud loo tuujiyo jirka dhalada. Gaar ahaan dhalada ayaa leh keychain. Waxaad si sahal ah ugu ridi kartaa jeebkaaga, boorsadaada, boorsadaada gacanta, guntinta suunka, iwm. Intaas waxaa sii dheer, dhanka baakadka, waxaan sidoo kale sameynay sanduuq bandhig si aan ugu fududeyno soo bandhigida miiska. Shayga waxaa loo isticmaali karaa marar badan, xafiisyo, guryo, iskuulo, hudheelo, iwm.
5. Waxaan kuu haynaa cadaddo kala duwan oo ah nadiifiye gacmo oo aad adigu dooran karto. Waxaan taageernaa OEM iyo ODM.
Saar shey ku filan gacmaha si aad u daboosho dhammaan dusha sare. Isku xoq gacmaha ilaa qalalan. Kormeer carruurta ka yar 6 sano markaad isticmaaleyso sheygan si aad uga fogaato liqitaanka.
Si dibedda loogu isticmaalo oo keliya. Guban kara. Ka fogow dabka ama ololka
* Markaad isticmaaleyso sheygan
Ka fogoow indhaha, haddii ay dhacdo inaad taabato indhaha, si fiican biyo ugu maydh.
Ha ku neefsan ama ha quusin.
Ka fogow taabashada maqaarka jaban.
Jooji isticmaalka oo weydii dhaqtarka haddii xanaaqa ama casaanku yeesho xaalad sii socota in ka badan 72 saacadood.
Ha dhigin wax ka sarreeya 105 F.
Maro midab ah ayaa laga yaabaa
Waxyeello u leh dhammaynta alwaaxda iyo caagagga.
Hore: Yar oo la qaadan karo maalin kasta jeermiska jeermiska iyo masaxa bakteeriyada
Xiga: 75% Nadiifiyaha Gacanta ee Nadiifinta Khamriga Gacantiisa
gacmo nadiifiye badan
gacmo nadiifiyaha caadada ah
gacanta nadaafadda sumadaha
Gacmo Nadiifiyaha Fda
Qalabka nadaafadda gacanta
safarka gacmo nadiifiyaha
Nadiifiyaha Gacanta Yar
Nadiifiyaha Gacanta ee Jeebka
75% Horusocodka Aalkolada Looga Hortago Bakteeriyada ...
La-habeyn karo 75% Alkohol Antibacterial Instant ...